LegitVPN.com - thelekisa ezona nkonzo zibalaseleyo zeVPN
I-VPN ezintle zeNetflix
Eyona VPN ilungileyo yase China
Eyona VPN ilungileyo yeChannel
Eyona VPN ilungileyo kwiTorrent
Eyona ndlela ihamba phambili yeVPN
Wamkelekile kwiLegitVPN.com - silapha ukukukhokela ukuba ukhethe eyona VPN ilungileyo kwiimfuno zakho.
Siphonononga kuphela ababoneleli be-VPN abakhuselekileyo nabakhawulezayo ukuzisebenzisa ezibonise ukuthembeka kwabo.
Thelekisa ababoneleli ababalaseleyo beVPN
Ababoneleli ngeVPN abagqwesileyo nabona basemthethweni ngonyaka ka-2020
Funda zonke izimvo
Isivivinyo seentsuku ezi-30 zasimahla
Iyahambelana neNetflix, i-BBC kunye neDisney + Hulu
Ngaphezulu kwamazwe angama-55
Ndwendwela indawo yeNordVPN
Ngaphezulu kwamazwe angama-90
Ndwendwela indawo ye-ExpressVPN
Ixabiso eliphantsi leVPN phaya
Ndwendwela indawo yeSurfshark VPN
Isivivinyo seentsuku ezi-45 zasimahla
Ndwendwela indawo yeCyberGhostVPN
Isivivinyo seentsuku ezi-31 zasimahla
Ngaphezulu kweeseva ze-2000
Ndwendwela indawo yePureVPN
Vulela izithintelo ze-Geo ngokulula ngokusasaza iiVPNs ezifanelekileyo. Seta inqaku elilula ukukukhokela.
I-Chrome sisikhangeli esisetyenziswa kakhulu kwihlabathi. Kubaluleke kakhulu ukukhusela ukhuseleko lwakho kunye nokungaziwa ngezixhobo zeVPN.
Wonke umsebenzisi we-intanethi kufuneka alumke ngeTorrents kunye ne-peer-to-peer softwares. Sincoma ukusebenzisa i-VPN ngasese.
I-China ingqongqo kakhulu kwimigaqo-nkqubo malunga nokungena kwiwebhu kwihlabathi liphela. Kubakhenkethi kunokuba yinto ecaphukisayo.
I-VPN ekwabizwa ngokuba yinethwekhi yangasese yangasese yinto onokuyiva ngayo. VPN yisoftware ekhusela unxibelelwano phakathi komamkeli kunye nomthumeli. Yenza ukugcwala kwabantu kungaziwa. Uninzi lwabantu luyisebenzisela ubumfihlo obongezelelekileyo kunye nokungaziwa kodwa rhoqo isetyenziselwa ukwenza ii-geoblocks ezinokuthi zibekwe ngurhulumente.
Iinkonzo ezininzi zokusasaza zipapasha iimovie ezintsha kunye nothotho e-USA umzekelo ngaphambi kokuba ziphele kwilizwe lakho.
Nge VPN ungafikelela kumxholo we-USA onikezelweyo, kuba i-webserver icinga ukuba use-US.
Kufuneka ndenze ntoni xa ukhetha i-vpn-service efanelekileyo?
Kukho amakhulu e-VPNs phaya kodwa sithelekisa kuphela ezona ziphambili. Uninzi lwazo lunika izithembiso ezingezizo ezingenakuze zihlangule, sixhasa ii-VPNs esele zikho kwaye zaziwa kakuhle kumzi mveliso wezokhuseleko. Ngo-2017 uphando oluninzi lubonise ukuba baninzi abantu abasebenzisa kakubi i-VPNs yasimahla ye-Android ukufumana ukufikelela okungathintelwanga kwinkqubo yamaxhoba.
Akukho zi-vpns ezisemthethweni ezisemthethweni, kuphela izilingo zasimahla kwaye ziyafumaneka phezulu kweli phepha.
Uyazi njani i-VPN esemthethweni?
Awudingi kuzikhathaza ngaloo nto. Sele sivavanye unxibelelwano olukhuselekileyo lweVPN oluqhutywa ziinkampani zokwenyani ezithembekileyo kwihlabathi liphela.
Ngaba iVPN isantya senethiwekhi esicothayo?
Kwezinye iimeko oku kunokuba yinyani. Sivavanye amakhulu ababoneleli ngeVPN ahlukeneyo ukubona ukuba yeyiphi na enokuthi ihambise owona msebenzi mhle ngaphandle kokuphulukana nepropathi ebalulekileyo. Sivavanye kwiimidlalo kunye nokuhamba kwabo ukuze babone ukuba ziyinyani na izinto abazithethayo.
Ngaba i-VPN kwi-intanethi ikhuselekile?
Ngokuqinisekileyo. Xa usebenzisa i-VPN awaziwa ngokupheleleyo kwaye ukhuselekile. Akukho mntu uyazi ukuba wenzani, ungubani kwaye uphi.
Ngaba i-VPN isusa iintsholongwane kunye neetrojans?
Ngelishwa hayi. Ii-VPNs zihlala zibonwa njenge-antivirus kodwa azinjalo. Bakhusela kuphela unxibelelwano lwakho kwiwebhu ebanzi. Akunakukhusela kwiifayile ozikhuphelayo okanye kumaphepha owandwendwelayo.
Ngaba kufuneka ndicime i-VPN xa ndingayisebenzisi?
Hayi akufuneki. Abantu abaninzi bayigcina rhoqo ukukhulisa ubumfihlo. Xa kuziwa kwiifowuni nakwizixhobo eziphathwayo kunokuba kukutya ibhetri.
Ungayisebenzisa njani inkonzo yeVPN?
Sebenzisa iVPN kulula kwaye kuyakhawuleza, kuqala ngamanyathelo alula.
Fumana iVPN efanelekileyo kwiimfuno zakho. Sikunceda ngale nxalenye ukuze ungazenzi ixesha lokuchitha uphando, njengoko sele sivavanye bonke ababoneleli nge-VPN.
Nje ukuba uthenge iVPN ubufuna ukufumana iziqinisekiso zakho. Ngezi ziqinisekiso ngena kwiwebhusayithi yakho ye-VPN kwaye ufake usetyenziso kwizixhobo ozifunayo. Inokuba lilaptop, iselfowuni okanye idesktop. Ungayifumana kuzo zonke.
Ngoku uyifakile isoftware lixesha lokuba uyivule kwaye uqhagamshele kwindawo oyithandayo.
Isebenza njani iVPN?
Jonga ukuba kulula kangakanani ukuyifaka kunye nokuyisebenzisa. Inxalenye ekhohlisayo kuphela efumana iVPN efanelekileyo kakhulu kwimeko yakho.
Iindaba zokhuseleko kunye neepatches
ICisco kunye noMlilo osesichengeni 23.7.2020
Wonke umntu osebenzisa iCisco kunye noMlilo kufuneka bahlaziye abaqhubi babo ngokukhawuleza. Kufunyenwe ubungozi.
Siliqela labantu ebekwishishini lokhuseleko lwe-cyber amashumi eminyaka. Sinomdla ekukhuseleni ubumfihlo be-intanethi kunye nedatha yobuqu. Yinto leyo elowo nalowo kuthi kufuneka agcine intrest kuyo. I-VPNs zezona ndlela zilula nezona zilula zokuzikhusela kulwaphulo-mthetho lwe-cyber ngokukhawuleza. Siyazi ukuba kunokubakho ababoneleli abahlukileyo beVPN ezinye zazo kuphela ngeenjongo ezingekho mthethweni. Kungenxa yoko silapha ukukukhokela ufumane eyona VPN ikhuselekileyo nekhuselekileyo.
I-VPN (inethwekhi yabucala ebonakalayo) umsebenzi ophambili kukugcina amanqanaba akho e-intanethi okhuseleko ephezulu ekulungiseni uqhagamshelo lwakho kunye nokufihla i-IP-adress yakho kubahlaseli abakhoyo.
I-VPN ingasetyenziselwa ukufikelela kumxholo we-geoblocked njengokubukela amanye amazwe imilambo kunye ne-tv-channels.
Unokukhuphela idatha kwi-intanethi ngelixa ugcina unxibelelwano lwakho olungaziwayo nolukhuselekileyo
Ukhuseleko lwe-Intanethi yinto ekufuneka sonke siyikhathalele. Ulwaphulo-mthetho olwenziwa ngekhompyutha luhlala lusanda kwaye uhlaselo luya lusanda suku ngalunye.
Uhlaselo oluqhelekileyo yi-Ddos (ukwala inkonzo okungafakwanga) eyaphula uqhagamshelo lwakho okanye ulwaphulo lwedatha yakudala apho idatha yakho yobuqu inokuvuza kwizandla ezimbi.
Ukuqinisekisa ukuba ukhuselekile kufuneka usebenzise i-VPN ababoneleli abakhuselekileyo, abakhawulezayo nabakhuselekileyo.
Siliqela labantu abanomdla wokukhusela imfihlo yethu kunye nabanye abantu. Eyona ndlela yokwenza oko kukufumana iVPN efanelekileyo. Ngokuvavanya nokuthelekisa ababoneleli abahlukeneyo beVPN sinokunceda abathengi benze izigqibo ezingcono.
Uphengululo lweCyberGhost VPN
Eyona VPN ilungileyo ye
ICisco Asa kunye nokuba sesichengeni koMlilo
I-2020 LegitVPN.com -ezona zibalaseleyo ze-VPNs